DEG-DEG: Kumannaan Taageereyaal Ah Oo La Wareegay Garoonka Emirates Saacad Ka Hor Kulanka Arsenal vs Everton - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Kumannaan Taageereyaal Ah Oo La Wareegay Garoonka Emirates Saacad Ka Hor Kulanka Arsenal vs Everton
DEG-DEG: Kumannaan Taageereyaal Ah Oo La Wareegay Garoonka Emirates Saacad Ka Hor Kulanka Arsenal vs Everton
Kumannaan taageereyaal Arsenal ayaa ah iskugu soo baxay bannaanka garoonka Emirates Stadium waxyar ka hor ciyaarta Arsenal ay la dheelayso Everton oo ay isla garoonka Emirates ku wada ciyaarayaan.
Taageereyaal tiro badan ayaa qabsaday waddooyinka soo gala garoonka iyo barxadihiisaba, waxaanay ka cadhaysan yihiin go’aankii ay kooxdu kaga mid noqotay tartanka Super League ee dhowaanta ay 12ka kooxood shaaciyeen in ay samaysteen laakiin ay markii dambe sagaal ka mid ah oo lix Premier League yihiin ay ka noqdeen.
Mulkiilaha Arsenal ee Stan Kroenke ayaa raalligelin ka bixiyey in kooxdiisu ay ka mid noqotay Super League, waxaana uu ballan-qaaday in aanay kooxdu bixin doonin lacagta ganaaxa ah ee ku waajibaysa kaddib ka bixitaanka tartankaas, isla markaana ay shirkaddiisu bixin doonto.
Sidaas oo ay tahay, waxa bannaanka Emirates Stadium ku sugan kumannaan taageereyaal ah oo sita boodhadh ay ku dalbanayaan in Kroenke uu kooxda iibiyo, kuna wareejiyo mulkiile dhegaysanaya taageereyaasha iyo waxa ay doonayaan.
Sawirrada laga soo qaaday taageereyaasha iyo muuqaallada tooska ay usoo tabinayaan telefishannadu ayaa shaki gelinaya haddii ciyaartoydu ay gudaha u geli doonaan garoonka Emirates oo ay buux-dhaafiyeen jamaahiirta cadhaysan.
Sida ay sheegtay warbaahinta PA, taageereyaasha ayaa illaa hadda mudaharaadkoodu aanu lahayn wax rabshad ah, waxaanay iskugu soo baxeen si nabad-gelyo ah iyagoo muujinaya in ay ka xun yihiin qaabka uu Kroenke u maamulayo naadiga.
Laakiin waxa jirta cabsi kale oo ah in ay rabshado dhalan karayaan daqiiqad walba inta ay taageereyaashu taagan yihiin bannaanka garoonka.
Si kastaba, taageereyaasha Chelsea ayaa usbuucan horraantiisii sameeyey mudaharaad noocan oo kale ah, waxaana ku xigay jamaahiirta Tottenham, halka ay Arsenal noqonayso kooxdii saddexaad ee lagu mudaharaado ka hor inta aanay bilaabmin ciyaarteedu.
Liverpool ayaa iyadana horraantii toddobaadkan iyadoo marti u ah Leeds United waxay ku mudaharaaday taageereyaasha Leeds, halka taageereyaal kale oo cadhaysan ay gudaha u galeen garoonka tababarka Manchester United maalintii Khamiista.